Mmepụta - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Iji meziwanye nrụpụta nke ọma, YALIS webatara teknụzụ ọhụrụ nke Computer Number Number (CNC). E jiri ya tụnyere ngwaọrụ igwe nkịtị, CNC na-eji ozi dijitalụ iji chịkwaa mmegharị na nhazi nke ngwaọrụ igwe, nke nwere ike mezue nhazi nke mgbagwoju anya na ogo dị elu na izi ezi. Na 2020, na mgbakwunye na iwebata igwe CNC, YALIS ga-agbakwunye Akụrụngwa Nchapu Akpaaka, Igwe Ntugharị Akpaka na akụrụngwa ọhụrụ ndị ọzọ. Site na akụrụngwa ndị a, YALIS emeela ka nrụpụta na imepụta ya kawanye mma, yana usoro usoro mmepụta ya kawanye mma.
2020 bụ afọ mbụ YALIS mepere ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ọgụgụ isi. Na-aga n'ihu iwebata nke akpaka anwụ-mgbatị igwe, akpaka polishing igwe, akpaka ịghasa ịkwado na ndị ọzọ na akpaka akụrụngwa, nakwa dị ka mgbakwunye nke ọkachamara oru pesonel, mmepụta usoro e agbara ndi mmadu. N'otu oge ahụ, YALIS emewo ka nhọrọ na njikwa nke usoro ntinye sikwuo ike, guzobere usoro njikwa usoro, wee mee ka ikike ịchịkwa ndị na-eweta ya.
Nnu raygba Ule Igwe
Automatic Die-mgbatị Machine
Nhazi nke ụlọ ọrụ ISO, nrụpụta na-aga n'ihu nke ikike mmepụta, njikwa njirisi nke ngwaahịa ahaziri iche na ngwaahịa ndị a na-eme na mgbatị nke nnyefe na-enyere YALIS aka iso ndị ahịa na asọmpi dị egwu n'ọdịnihu ma zute mkpa dị iche iche ahaziri iche ndị ahịa.
Akpaaka polishing Machine
Kọmputa Nchịkọta Nọmba Kọmputa
Igwe ule igwe